के तँ येशूलाई देख्न चाहन्छस्? के तँ येशूसँग बस्ने इच्छा गर्छस्? के तँ येशूले बोल्नुभएको वचन सुन्ने इच्छा गर्छस्? यदि त्यसो हो भने, तैँले येशूको आगमनलाई कसरी स्वागत गर्नेछस्? के तँ पूर्ण रूपमा तयार छस्? तैँले येशूको आगमनलाई कुन रीतिले स्वागत गर्नेछस्? मलाई लाग्छ, येशूलाई पछ्याउने हरेक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले उहाँलाई राम्ररी स्वागत गर्न रुचाउँछन्। तर के तिमीहरूले यो कुरा विचार गरेका छौ: के येशूको आगमन हुँदा तँ उहाँलाई साँच्चै चिन्नेछस्? के उहाँले भन्नुभएका सबै कुरा तिमीहरूले साँच्चै बुझ्नेछौ र? के उहाँले गर्नुभएका सबै कामहरूलाई तिमीहरूले साँच्चै निशर्त रूपमा स्वीकार गर्नेछौ? बाइबल पढेका सबैले येशूको आगमनबारे जान्दछन् र बाइबल पढ्ने सबैले उहाँको आगमनलाई उत्सुक्तापूर्वक प्रतीक्षा गर्छन्। तिमीहरू सबै त्यो क्षणको आगमनको निम्ति लालायित हुन्छौ, र तिमीहरूको निष्ठा सराहनीय छ, तिमीहरूको विश्‍वास लोभलाग्दो छ, तर तिमीहरूले गम्भीर त्रुटी गरेका छौ भन्ने कुरा के तिमीहरूले महसुस गर्छौ? येशूको आगमन कुन रीतिले हुनेछ? येशू सेतो बादलमा आउनुहुनेछ भनी तिमीहरू विश्‍वास गर्छौ, तर तिमीहरूलाई म सोध्छु: यो सेतो बादलले केलाई जनाउँछ? येशूको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका यति धेरै उहाँका अनुयायीहरूमा, उहाँ कुन मानिसहरूमाझ ओर्लिआउनुहुनेछ? यदि उहाँ तिमीहरूमाझ पहिले ओर्लिआउनुभयो भने, के अरूहरूले यसलाई अत्यन्त अन्यायपूर्ण कुराको रूपमा हेर्नेछैनन् र? म जान्दछु, तिमीहरू येशूप्रति अत्यन्त निष्ठावान् र बफदार छौ, तर के तिमीहरूले येशूलाई कहिल्यै भेटेका छौ? के तिमीहरूलाई उहाँको स्वभाव थाहा छ? के तिमीहरू कहिल्यै उहाँसँग बसेका छौ? तिमीहरूले उहाँको बारे कति धेरै बुझेका छौ? केहीले भन्नेछन् कि यी कुराहरूले तिनीहरूलाई नाजुक परिबन्धमा पार्‍यो। तिनीहरूले भन्नेछन्, “मैले बाइबल सुरुदेखि अन्तसम्म धेरै पटक पढेको छु। मैले येशूलाई कसरी बुझ्न सक्दिनथेँ र? येशूको स्वभावको त कुरै नगरौँ—उहाँले कुन रङको लुगा लगाउन मन पराउनुहुन्थ्यो सो पनि म जान्दछु। मैले उहाँलाई बुझ्दिनँ भन्दा तैँले मलाई होच्याइरहेको छैनस् र?” यी विषयहरूमा विवाद नगर भनी म तँलाई सुझाव दिन्छु; बरु शान्त भएर तल दिइएका प्रश्नहरूको बारेमा संगति गर्नु उत्तम हुन्छः पहिलो, यथार्थ के हो र सिद्धान्त के हो भन्ने के तँलाई थाहा छ? दोस्रो, धारणाहरू के हुन् र सत्यता के हो भन्ने के तँलाई थाहा छ? तेस्रो, कल्पना गरिएको के हो र यथार्थ के हो भन्ने के तँलाई थाहा छ?
केही मानिसहरूले आफूले येशूलाई बुझ्दैनन् भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्छन्। म अझै तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले येशूलाई अलिकता पनि बुझ्दैनौं र उहाँको एक शब्द पनि बुझ्दैनौं। त्योचाहिँ यसैले हो कि तिमीहरूले बाइबलमा उल्लेख गरेको विवरणको कारणले गर्दा र अरूहरूले भनेका कुराको कारणले गर्दा उहाँलाई पछ्याउछौ। तिमीहरूले उहाँलाई कहिल्यै पनि भेटेका छैनौं, उहाँसँग बस्ने कुरा त परै जाओस्, र तैँले उहाँलाई एक क्षणको निम्ति पनि साथ दिएको छैनस्। यस्तो अवस्थामा, येशूबारे तेरो बुझाइ सिद्धान्त बाहेक केही होइन र? के यो यथार्थरहित छैन र? सायद, केही मानिसहरूले येशूको तस्वीर देखेका होलान् वा कोही येशूको घरमा स्वयम् गएका होलान्। सायद केहीले येशूको लुगा छोएका होलान्। तँ स्वयम्‌ले येशूले खानुभएको खाना नै खाएको भए पनि, उहाँबारे तेरो बुझाइ अझ पनि व्यावहारिक छैन, केवल सैद्धान्तिक मात्र छ। कुरा जे भए पनि, तैँले येशूलाई कहिल्यै देखेको छैनस् र शारीरिक रूपमा येशूसँग एक क्षण पनि हिडेको छैनस्, त्यसैले येशूबारे तेरो बुझाइ सदैव यथार्थरहित रित्तो सिद्धान्त हुनेछ। सायद मेरा शब्दहरू तेरो निम्ति त्यत्ति रुचिकर नहोलान्, तर म तँलाई यो आग्रह गर्छुः तैँले सबैभन्दा आदर गरेको लेखकका धेरै कृतिहरू पढेको हुन सक्छस्, तैपनि तैँले उनीसँग समय नबिताइकन के उनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छस्? उनको व्यक्तित्व कस्तो छ सो के थाहा पाउछस्? उनी कस्तो जीवन जिउँछन् सो के थाहा पाउछस्? के तँ उनको कुनै संवेगात्मक अवस्थाको बारे जान्दछस्? तैँले प्रशंसा गर्ने मानिसलाई पनि तैँले सम्भवतः पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनस्, त्यसो भए येशूलाई कसरी बुझ्न सक्छस् र? तैँले येशूको बारे बुझेका सबै कुराहरू कल्पनाहरू र धारणाहरूले भरिएका छन्, जसमा कुनै सत्यता वा यथार्थता छैन। यसले दुर्गन्ध निकाल्छ र यो देहले भरिएको छ। यस्तो बुझाइले येशूको फर्काइलाई स्वागत गर्न तँलाई कसरी योग्यको तुल्याउन सक्थ्यो र? देहका परिकल्पनाहरू र धारणाहरूले भरिएकाहरूलाई येशूले ग्रहण गर्नुहुनेछैन। येशूलाई नबुझ्नेहरू कसरी उहाँका विश्‍वासीहरू हुन योग्यको हुन्छन् र?
परमेश्‍वरको वचन | “सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरू: अध्याय २६”